GNOME 41.1 yakasvika ichivandudza zvikumbiro senge maConnections matsva | Linux Addicts
Fedora ichave isina kuvandudza desktop yako kwenguva pfupi. Fedora 35 llegó iyi Chipiri, uye yakazviita neshanduro yazvino yaive iripo panguva iyoyo. Mazuva matatu chete gare gare, chirongwa chinopa graphical nharaunda, maapplication nemaraibhurari kune yayo huru edition yakakanda GNOME 41.1, inova yekutanga kugadzirisa kugadzirisa mune ino nhevedzano. Saka nekudaro, haina kusuma chero mitsva yakakwira, asi inosuma zvigadziriso zvinoita kuti zvese zvishande zvirinani uye zvakavimbika.
Rangarira kuti neGNOME 40 yakakosha kusvetuka kumberi yakatorwa. Kunyangwe zvinyowani zvinobata maziso senge touchpad gestures zvakaunzwa, ivo vakakwanisawo kuvandudza mashandiro. Izvozvo kuita kuri nani muGNOME 41 izvo vakatipa munaGunyana, saka ndinofunga vashandisi veFedora 35 vachafara zvishoma kupfuura vashandisi veUbuntu 21.10 Impish Indri.
Pfungwa dzeGNOME 41.1
Sezvo isu tichigona kuverenga mukati Iyi link, iyo yakasarudzika yeGNOME 41.1 ndeye:
GNOME Shell yakavandudza kugadziridzwa kwezvidhori kana zvakavanzwa, iyo GTK color selector, shanduko yemhando yepamusoro yakagadziridzwa, kupururudza mumashandisirwo eGTK kwakagadziridzwa uye kutsigirwa kwemafaira eruzha mune zviziviso.
GNOME Software inogona kutsvaga mawedzero, pakati pezvimwe zvinowedzeredzwa senge codec yekuisa maitiro.
Nautilus ikozvino inogona cache iyo Scripts uye Nyowani Document menyu kudzivirira kunonoka uye nekupa sarudzo yekusvetuka maitiro kana kubviswa kwefaira kunotadza chete kana paine mamwe mafaera, pakati pezvimwe zvigadziriso.
Kufona app uye GNOME Connections kuvandudzwa, izvo zvino zvinogona kuzadza kero dzisina kukwana.
GNOME Builder ikozvino inopa sisitimu kana mushandisi font paunotanga application.
Iyo control center yakagadzirisa activation yedata mushure mekugadzirisa APN mune network network.
Mutter uye Wayland kuvandudzwa, pakati pezvimwe zvinogadziriswa uye kuvandudzwa kwekuita.
GNOME 41.1 yakatangwa nezuro nguva pfupi yapfuura v40.5. Mamwe maapplication achaonekwa paFlathub mumazuva mashoma anotevera, nepo desktop uye zvimwe zvinhu zvakafanira kumirira yedu Linux kugovera kuwedzera mapakeji matsva kune ayo epamutemo repositori.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 41.1 yakasvika ichivandudza zvikumbiro senge maConnections matsva, pakati pevamwe
WINE 6.21 inotanga nekushandiswa kweMSDASQL uye zvakare inodarika chipingamupinyi chekuchinja mazana mana.